Ebu Box Suppliers na Factory - China akpụzi Box Manufacturers
Onye ahịa anyị
Flask Nkedo Line
Ọkara Automatic Nkedo Line
Static Pressure Nkedo Line
Flask Nkedo Machine
Air Multi- pistin Nkedo Machine
Hydraulic Multi- pistin Nkedo Machine
Jolt Squeezing Nkedo igwe
Static Pressure Nkedo Machine
Flaskless Mouldind Nweta
Kwụ Flaskless Nkedo Line
Flaskless Nkedo Machine
Ngwá Ọrụ Na-agbanye Ihe
Ọkara Akpaaka uringwụkwasị igwe
Uwe mkpuchi akwa
Sand Nkedo Nkedo Line Iji Nkedo Nkedo Flask maka Foundry
Nkọwa ngwaahịa: Ikpụzi flasks bụ ngwá ọrụ ejiri na ntọala. Mgbe igwe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, ihe nkedo na-ebu ájá iji mee ihe ụfọdụ. Mgbe ihe dị ka a wụrụ awụ ígwè wụsara na a kpụrụ akpụ nke na-ejide site na ịkpụzi flasks, wụrụ awụ ihe ga-sie ike na-etolite ka mgbatị na ị chọrọ. A na-ejikarị ihe nkedo na-akpụzi ihe na-agbazi ígwè wee mezie ya iji nweta nkọwa. Usoro azụmahịa 1. Nlele ma ọ bụ Ihe osise nke ndị ahịa 2.Tool ...
Sand Nkedo Nkedo Line Ji Nkedo Nkedo Box maka Foundry
Kpụzi flasks bụ ngwá ọrụ eji na foundries. Mgbe igwe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, ihe nkedo na-ebu ájá iji mee ihe ụfọdụ.
Nkedo Box maka Static Pressure Automatic Nkedo Line
Nkwakọ ngwaahịa & nzipu Nkwakọ ngwaahịa nkọwapụta: ịgba ọtọ mbukota ma ọ bụ Osisi igbe nzipu nju: n'ime ụbọchị 30 n'elu nnata nke nkwụnye ego Product Usoro 1.Focus na nnukwu / ọkara size oge ọgbụgba, nakwa dị ka obere size omume. 2.Gray ígwè / Ductile ígwè mgbatị na Resin-bonded ájá mgbatị usoro. Usoro Ọrụ anyị Ọrụ 1. Nlereanya ma ọ bụ Ihe osise site na ndị ahịa 2.Tooling amaghị & Mkparịta ụka 3.3D Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ 4.Tooling Production 5.Rough akụkụ emeputa 6.CNC machining 7.Fitting & Fini ...
Flask maka akpaka ịkpụzi akara
Nkedo igbe maka akpaka ịkpụzi akara
Flask bụ ihe dị mkpa na nkà na ụzụ na ngwá maka akpaka ma ọ bụ ọkara akpaka ịkpụzi akara. Igwe na-ebugharị site na igwe CNC dị elu iji hụ oke nkenke na mgbanwe dị mma, akụkụ nyocha na CMM. Ihe nke ígwè ductile, isi awọ ígwè nke ọkwa dị elu na welded-ígwè nwere ike ịbụ nweta, flask nwere nnukwu rigidity ma nwee ike ibu mmetụta dị elu. Anyị nwere ike ịmepụta ma rụpụta ụdị flasks dị iche iche maka ihe ị chọrọ, anyị na-arụkwa mpempe akwụkwọ na ụgbọ ala pallet dịka eserese na nkọwapụta nke ndị ahịa.
Sandbox na Nkedo igwe Systerm
Nkwakọ ngwaahịa & nzipu
Nkwakọ ngwaahịa nkọwa: Igba ọtọ mbukota ma ọ bụ Osisi igbe
Nzipu zuru ezu: n'ime ụbọchị 30 n'elu nnata nke nkwụnye ego
1. Nwee oke isiike.
2. Nwere ike iburu mmetụta dị elu.
3. Nwere ike ịgba ọsọ nke ọma na ịkpụzi ahịrị.
4. Chepụta ma rụpụta ụdị flasks dị iche iche maka ihe ị chọrọ.
Kpụzi flasks bụ ngwá ọrụ eji na foundries. Mgbe igwe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, ihe nkedo na-ebu ájá iji mee ihe ụfọdụ. Mgbe ihe dị ka a wụrụ awụ ígwè wụsara na a kpụrụ akpụ nke na-ejide site na ịkpụzi flasks, wụrụ awụ ihe ga-sie ike na-etolite ka mgbatị na ị chọrọ. A na-ejikarị ihe nkedo na-akpụzi ihe na-agbazi ígwè wee mezie ya iji nweta nkọwa.
Sand Nkedo Nkedo Line Ji Nkedo Flask maka Foundry
Kpọtụrụ US na-eke uru maka ndị ahịa
Ọkara Automatic Nkedo Machine, Flask akpụzi Machine, Flask Nkedo, Sandbox, Punch Out igwe, Nkedo Nkedo Flask,